ओली–प्रचण्ड टकरावले शिवमायालाई ‘सभामुखको चिठ्ठा – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/ओली–प्रचण्ड टकरावले शिवमायालाई ‘सभामुखको चिठ्ठा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको टकरावले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्नेतर्फ राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न थालेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको सत्तारुढ नेकपाभित्र अहिले पनि स्पष्ट रुपमा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी धार देखिन्छ ।
यही धारले पनि सभामुख चयनमा प्रभाव पारिरहेको छ । तत्कालीन समयमा पूर्वमाओवादीको भागअनुसार कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । तर, उनले आफूमाथि यौ’नदुराचारको आरोप लागेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिए । अहिले प्रचण्ड पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउन चाहन्छन् । जसका लागि अग्नी सापकोटाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डको प्रस्तावविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम अघि सारेका छन् । दुवै आ–आफ्नै अडानमा देखिँदै आएका छन् । बेला बेला उनीहरुबीच सहमति भएको चर्चा हुने गरेपनि हालसम्म कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा निचोडमा पुगेका छैनन् ।
महिला सशक्तिकरणमै विद्यावारिधि गरेकी डा. तुम्बाहाङफे पनि सभामुख पदको दाबी गरेर बसेकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ रहेको बताइन्छ । पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाएमा पूर्वमाओवादीको भागमा केही पनि नरहँदा पार्टी नै विलय गराएका भान हुने प्रचण्डको बुझाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि पूर्व एमाले पक्षधरलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको साथ पाएकी तुम्बाहाङ्फे पूर्व एमालेकी हुन् । यसर्थ अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली पनि तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन सहमत हुन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित पूर्वएमालेका धेरै नेताहरु अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई अनुमोदन गर्न चाहन्छन् । पूर्व एमालेका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमै एमसीसी पारित हुने बताएका छन् । तर, प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादीका धेरै नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् । अमेरिकी सैनिक गठबन्धन र एमसीसीको पक्षमा नेपाल उभिन नसक्ने प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादीको नेताहरु अडान कायम छ ।
सभामुख चयन सकस बन्नु पनि एमसीसी पनि एउटा कारण बनेको छ । अब बस्ने संसद बैठकबाट मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारीले अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र यो विषय पेचिलो बनेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक ः पार्टीलाई थप चलायमान बनाइने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गरिएको छ । यही पुस २३ बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७५ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था भए पनि डेढ वर्षमा पहिलो पटक बस्न थालेको हो । विधानमा २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेका खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विसं २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकतापछिको यो दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो । पहिलो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ खुवाइएको थियो । त्यसपछि यता बैठक हुन सकेको छैन । पार्टी एकता भएको झण्डै डेढ वर्षपछि बैठक हुन थालेको हो । बैठक प्रदर्शनीमार्गस्थिति राष्ट्रियसभागृहमा गर्नका लागि बुकिङसमेत भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठक आगामी बुधबारदेखि पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । बिहान ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म बैठक हुनेछ । पार्टी एकतापछि पहिलो पटक कार्यसूचीसहित बैठक बस्न थालेको हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची सचिवालय बैठकले तय गरेको थियो ।
पार्टी प्यालेसको इनार मर्मत गर्न पसेका दुई जनाको निधन, गम्भिर एक जनाको उपचार हुँदै